Wasiir Dhuuboow “Cayaartooydan yar yar waa mustaqbalka beri” – Radio Muqdisho
Wasiir Dhuuboow “Cayaartooydan yar yar waa mustaqbalka beri”
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Isboortiga iyo dhallinyarada ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cismaan Aadan Dhuubow oo ay wehliyaan mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda dhalinyarada, xubno ka tirsan guddiga olombikada Soomaaliyeed iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa garoonka kubadda cagta ee koonis kaga qeyb galay tartan lagu soo xulayay arday laga soo kala xulay dugsiyada magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka qeyb gali doona tartanta kubadda cagta iskuulaadka Jaamacadda carabta oo ka dhici doono dalka Qadar.
Macalimiinta iskuulaadka iyo kuwa xiriirka ee tababarka siinayay cayaartooydan da’yarta ah ayaa waxa ay tilmaameen in carruurta ay gaarayaan 56-, isla markaana ay maanta ka soo xuleen 20 arday, kuwaasi oo la gaarsiin doono ilaa iyo 30 cayaartooy.
Xuseen Xasan kulmiye oo ah macalin ka tirsan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa tilmaamay in dhalinyaradan ay leeyihiin mustaqbal fiican, loona baahanyahay in la joogteeyo tababarsiinta carruurta da’da yar, si ay u noqdaan mustaqbalka beri.
Cabdirashiid Maxamed Ciise oo soo qaban qaabiyay howshan ayaa sheegay in carruurtan ay ka qeyb geli doonaan tartan isboorti oo dalka Qadar lagu qaban doono, kaasi oo ay la cayaari doonaan cayaartooyd da’doodu gaareyso 11 sano.
Maxamed Cumar Idiris oo ah mas’uul ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada ayaa tilmaamay in ardaydan laga soo kala xulay iskuulaadka magaalada, oo ay la kaashadeen daladaha waxbarashada, isagoo Wasaaradda Isboortiga ka codsaday inay halkan ka sii amba qaadaan howsha.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda cayaaraha iyo dhallinyarada ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cismaan Aadan Dhuubow ayaa hoosta ka xariiqay in ardaydan ay beri noqon doonaan mustaqbalka cayaartooyda Qaranka, ayna dhiiri gelinayaan tallaabooyinka lagu horumarinayo isboortiga dalka.
“Waa fursad fiican oo mustaqbal u noqon karta, jiilkan yar yare e aad arkeysaan, runtii Wasaaraddu way bogaadineysaa tallaabooyinka lagu dhiiri gelinayo da’yarta isboorti, oo aan dhihi karo inay Soomaaliya u tahay mustaqbal fiican”ayuu yiri Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Dhallinyarada.
Wasiir ku-xigeenka ayaa intaasi kadib waxa uu kormeer ku tegay garoonka kubadda kolleyga ee degmada C/casiis, gaar ahaan qeybta dabaasha iyo binkaha, halkaasi oo uu warbixin kaga dhageyso xubno ka tirsan GOS, si dib u habeyn loogu sameeyo garoonkaasi.
Ururka Dhagoolayaasha Soomaaliyeed oo u Dabaal degay todobaadka Dhagoollada “Sawirro”